ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင်တိုင်လူပျိုင်အဘယ်ကြောင့် – ဒါဟာကျော်ရယူပါ
အားဖြင့် Evan မာ့ခ် Katz
သင်တိုင်လူပျိုင်အဘယ်ကြောင့် – ဒါဟာကျော်ရယူပါ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 15 2020 |6မိဖတ်ပြီးသား
ကျွန်မပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာခဲ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးက, ငါသည်အ Kenny ရော်ဂျာထံမှသင်ယူ. ကိုယ့်နောက်ကျောကိုတညဉ့်ကိုသတိရ 1977: ငါသည်အပျောက်ခဲ့, ပုလင်းရိုက်, အိမ်မှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေ. ဟုတ်ပါတယ်, ဒီကိုရောက်လာတာငါးနှစ်ရှိ, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ပိုကောင်းကိုမသိကြောင်းပြောနိုင်, ဒါပေမယ့် Kenny ချိတ်ငါ့ကိုပယ်မသွားပါစေလို. ထိုအချိန်တွင်, သူသည်မိမိအဘို့အများအားဖြင့်လူသိများခဲ့သည် 1974 ထိုး, Lucille. သို့သော်ဘီယာအဖြစ်စီးဆင်းကိုနာရီနဲ့အမှန်ခြစ်ထားတာမှာရှိတဲ့, ငါသည်ငါ့အဘွားအိုနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းဆွေးနွေး, Kenny Texas ပြည်နယ်နွေရာသီမိုဃ်းကောင်းကင်အဖြစ်လွင်ပြင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုကအားလုံးကိုထွက်ချထား.
“သင်သည်လာသောအခါ hold'em မှသိမှရရှိပါသည်, လာသောအခါ fold'em မှသိပါတယ်။”
ဘာသာပြန်ချက်: သင်တစ်ဦးငြင်းခုံ၏အဆုံးဆုံးရှုံးသွားပေါ်မှာဆိုရင်, သင်ပိုကောင်းတက်အသင်းကိုမရဏာနိုင်ငံ၏ပိတ်တောင်းပန်ရန်ဖို့သင်ယူ.
သတ္တုတွင်း၏ရည်းစားကယ့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှဝတ်ဖို့အဝတ်အစားဘယ်လိုအကြောင်းအလေးအနက်ခဲ့သည်. ဒါဟာသြဂုတ်တွင်တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းတွင်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အနက်ရောင်ထွက်ခဲ့သည်, အနီရောင်လွန်းဖော်ပြဘဲထားခဲ့, အဖြူရောင်နဲ့မမျှမထင်ရှားခဲ့သည်. သူမသည်ပူပြင်းတဲ့-ရှာဖွေနေ lavender ပိုးအရေအတွက်ရွေးချယ်ရာတွင်တက်အဆုံးသတ်, ငါတို့နှစ်အလွန်ပျော်ရွှင်ဖန်ဆင်းသော . . . ကျနော်တို့ထဲမှာသွားနှင့်သူမရှိသမျှကိုသတို့သမီးအရံလိုဝတ်စားဆင်ခဲ့သည်ကိုမြင်သည့်တိုင်အောင်.
ဒါကမှတကပြဿနာမဟုတ်ခဲ့. အစစ်အမှန်ပြဿနာငါသည်အပြက်ယယ်ပြုခဲ့. ကရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်များအားဖြင့်ကြောင့်. ဒီတစ်ခါလည်းငါ့ကိုအအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြှနျုပျတို့သညျဤအသေးအဖွဲအဆင်မပြေအတိတ်ငါတို့လမ်းပြက်လုံးနိုင်ဟုယူဆမိ, ကျွန်တော်အကြောင်းလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ကတည်းက. uh uh. မသာငါ့ရည်းစားကိုဗီရိုဆင်တူအားဖြင့်စိတ်ဒါဏ်ရာခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါ့ jocular ထုံးစံကိုငါ့ Grand Canyon ချောက်ကြီးများ၏အရွယ်အစားအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတူး. သူမ၏အခြေအနေကိုပေါ့ပါးစွာခြမ်းကိုတွေ့မြင်ရရန်ကြိုးစားနေ၏မိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်, ငါမလုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ profusely တောင်းပန်ရန်နှင့်သူမ၏ဒုက္ခများနှင့်အတူစာနာတတ်ခဲ့သဘောပေါက်. ရက်အနည်းငယ်နှင့်မျက်ရည်တစ်ခုလုံးအများကြီးနောက်ပိုင်းတွင်, ကျွန်တော်တက်ကိုဖန်ဆင်း. သို့ရာတွင်, ငါ get-go မှ Kenny ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအောကျမေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်, ငါသည်အကျွန်တော်တို့ကိုနှောင့်ရှက်တစ်ခုလုံးအများကြီးနှစ်ခုလုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်.
“ကွာလှမ်းသွားသည့်အခါကိုသိ, မူသောအခါကို run ဖို့ကိုငါသိ၏။”
ဘာသာပြန်ချက်: သင်သဘောမတူရန်သဘောတူမနိုင်လျှင်, သင်ကအိပ်ရာပေါ်မှာမျက်နှာကျက်သို့မဟုတ်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိုက်ကြည့်အချို့သောအလွန်ရှည်လျားနေရသကဲ့သို့အဘို့အရောက်နေ.
ရှင်းလင်းချက်: သဘောမတူဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဒါဟာကျော်ရယူခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်, အဘယ်သူမျှမအတွက် step မသွားသည့်ခုံသမာဓိနှင့်ဆုချီးမြှင့်ရှိမယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ဖွင့်ကြောင့်ဆိုသော်ထောက်ပြခဲ့သည် 65 ရာခိုင်နှုန်းအခွင့်အရေးနှင့်သူယ် 35 ရာခိုင်နှုန်းညာ. ကျရှိရင်တောင်, သင်စဉ်အသင့်ကံဆိုးရှာကျော်အနိုင်ရခဲ့ပြီးပြီသမျှသောအငြင်းခုံအမှတ်စုစည်းပြီးလျှင်ပင်, နေမကောင်း-အကြောင်းကြားချစ်သူ, သင်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုလို? အဘယ်အရာကိုမျှ. “အနိုင်ရ” ဆင်ခြေအနိုင်ရသလောက်အချိန်ယူ 3,000 Skee-Ball ကိုလက်မှတ်တွေ — နှင့်သိရပါတယ်ညီမျှတန်ဖိုးအကြောင်း. ဒါပင့်ကူအကွင်းနှင့် Superballs လက်တဆုပ်စာမဟုတ်လျှင်ရန်အရေးကြီးလှသည်, ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းဆုံးကန်.
“သင် sittin တဲ့အခါသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရေတွက်ဘယ်တော့မှမ’ စားပွဲ၌ / countin အတွက်လုံလောက်ရှိပါတယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်’ ထို dealin ပြုနေသည့်အခါ။”
ဘာသာပြန်ချက်: ဂုဏ်ယူပါတယ်, ဒီတိုက်ပွဲကိုသင်အနိုင်ရခဲ့. အခုတော့တစ်ဦးသည်လျောက်ပတ်ဆုရှင်ဖြစ်ပြန်ခေါင်းစဉ်ကိုတက်စေဘယ်တော့မှမ.
ရှင်းလင်းချက်: တခါတရံတွင်အမှုအရာရှင်းရှင်းလင်းလင်း-cut များမှာ. သူကရုပ်ရှင်တွေမှာယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူတိုက်ပွဲစတင်. သူကအရက်မူးတယ်ညစာစားပွဲပါတီမှာမိမိကိုမိမိအမျိုးထဲကမိုက်သောသူ၏အရာ၌ခန့်ထား. သူသည်သင်နှစ်နာရီစောင့်နေညစာနှင့်လက်ဝဲဘက်အဘို့အအစီအစဉ်များရှိကြောင်းကိုမေ့လျော့ခဲ့. ထိုသို့ဖြစ်ရပ်များအတွက်, သူသည်နောက်မိတာဆင်ခြေဆင်လက်ရှိပါတယ်. ဤသူသည်တစုံတယောက်ကိုတမျိုးကိုတီထွင်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်သူက Semi-သင့်လျော်အသံကတစ်ခုခုကိုအတူတူ cobble မခံနိုင်သည်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ. သို့သော်သမျှသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ, သူ၏အပြုအမူမှားခဲ့ကြ, သူကတချိန်လုံးခြေလှမ်းတက်င်တောင်းပန်ရန်. ပြီးတော့သင်, သင်သည်ဖြစ်ကြောင်းလူတန်းစားလုပ်ရပ်, မိမိအချတောင်းပန်ရန်ကိုလက်ခံဖို့ကမလွှတ်ရှိသည်. အတိတ်သဘောထားကွဲလွဲရန်မ allusions. အနာဂတ်စစ်ပွဲများအတွက်အတက်နဲ့သိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ခဲယမ်းမီးကျောက်မရှိပါ. သေချာပေါက်ကိုမျှ passive-ရန်လိုမှတ်ချက်များ. သင်မှန်ပါတယ်, သူမှားတယ်င်, ရှေ့ဆက်သွားသည်!
ငါသိတစ်ဦးကစုံတွဲသည်အိမ်ထောင်ရေး squabbles သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာရှိသည်. တစ်ညနေ, သူတို့သဘောတူခဲ့တယ်တစ်ဦး touchy အငြင်းအခုံတက်ဖာပြင်သောခဲ့ပြီးနောက်သောနေ့ရက်ကာလကို, ခင်ပွန်းပန်းပွင့်များ၏နှစ်ဦးနှင့်အတူပန်းစည်းအိမ်ပြန်လာ. ထိုနေသော်လည်း “ငြိမ်းချမ်းရေး” သူတို့လုပ်သောနှင့်ပန်းလက်ဟန်ခြေဟန်ခဲ့ကြောင်း, သူ့သူမရဲ့ကြောင် skinned ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကဲ့သို့ဇနီးအဖြစ် pissy နှင့်ကျောက်-မျက်နှာကျန်ရစ်. မကောင်းပါ. သင်ထစေပြီးနောက်, သင်သည်အမှုအရာတို့ကိုမလွှတ်ရှိသည်, အထူးသဖြင့်အခြားလူများ၏ရှေ့မှောက်၌. ငါဇနီးတော်ကိုအစဉ်မပြတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်မှုများအတွက်သူမ၏ခင်ပွန်း berated သောအခြားမောင်နှံစုံကိုသိ (စာရေးဆရာ), သူမအပြည့်အဝကောင်းစွာမိမိရွေးချယ်ထားသောအဓိကလုပ်ငန်း သိ. သူ့ကိုလက်ထပ်ပေမယ့်. မသာသူမ၏အနုတ်လက္ခဏာ jibes အကယ်စင်စစ်မိမိအယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုပတ်လည်မှာလူတိုင်းဆိုးဆိုးရွားရွားမသက်မသာဖန်ဆင်းတော်. ဟုတ်ပါတယ်, နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို “တောင်းပန်ပါတယ်” အားလုံးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေပါဘူး, မသာပန်းပွင့်များ၏ပန်းစည်း၏စုံတွဲတစ်တွဲမ, အရာအားလုံးကပြောပါတယ်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကသင်မူကား, ဖြစ်နိုင်သည်ပိုပြီးအဘယ်သို့ပြုနိုင်? နောက်တဖန်အထပ်ခါထပ်ခါတူညီတဲ့ကိစ္စထွက် hashing ၌အဘယ်အရာကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်?
အားလုံး sharing ခံစားချက်ကိုဖြစ်တစ်ချက်ဒါဟာင်, နှင့်အခြားအရာကအမြဲအချို့အရုပ်ဆိုးသို့အသေမြင်းကိုရိုက်ပုတ်ရန်, စေးကပ်ကော်. ကျွန်မမြင်း-based ကော်နှင့်သင်၏အဖိုးတန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနှိုင်းယှဉ်ဘယ်တော့မှ, ဒါပေမယ့် Kenny မယ်လို့, သူကနောက်ပိုင်းပျော်ရွှင်စွာအိမ်ထောင်သက်င်ကတည်းက 1997, ငါသည်သင်တို့ကိုသူ့အားနားထောင်သင့်တယ်ထင်.
ကျန်းမာသောအငြိုးကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုရှိင်. ကျနော်ဆန့်ကျင်ကျန်းမာငြိုး: (1) ငါ့ကဘဏ်; (2) ထိုကိုလံဘီယာအောက်လွှတ်တော်ဂီတကလပ်; (3) တစ်ချိန်ကငါ့အမုသားတစ်ဦးကပြောသည်ထရပ်ကားသူတစ်ဦးမလား, untangle မှနှစ်ကို ယူ. ဖျက်ဆီးဖြစ်ပေါ်စေ; (4) စနစ်တကျငါတို့ကြောင်တစ်ကောင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူအာ​​းလုံးမှသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးရန်လည်းအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ဘူးသော sniped မပြုခဲ့သူတစ်ဦး vet; (5) ငါ့ကောလိပ်ကျောင်းပါမောက္ခတဦး; (6) တရားသူကြီးချုပ် Scalia; နှင့် (7) ပုံမှန်အင်တာနက်ကိုအပေါ်မှာငါ့အရေးအသား plagiarizes သူတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်. ငါသည်သူတို့၏အတိတ်အပေါ် အခြေခံ. ဤလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး dislike (နှင့်, အချို့ကိစ္စများတွင်, ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော) သူ့တို့, ငါမငြင်းလိုပါဘူး. မြို့အပေါ်မှာငါလာပြီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ငါသည်အ bygones ပတ်သက်. မည်သည့် platitudes မှဝါဂွမ်းမသွားဘူး, ငါမြင်လျှင်ထိုသူတို့အဆိုလမ်းပေါ်ဆင်းလျှောက်သွားနေကြသည်, ငါသည်အသင်တို့ကဲ့သို့ညစ်ပတ်ကြည့်ရှုမယုံနိုင်သူတို့ကို flash လိမ့်မယ်. သင်ကယ့်ကိုကိုလံဘီယာအောက်လွှတ်တော်ဂီတကလပ်လမ်းပေါ်ဆင်းလျှောက်သွားနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါမခံဘဲ, သင်မူကား, အိုင်ဒီယာမရ. ငါသည်သင်တို့ကိုရန်သူများကိုရှိသည်သောစကြဝဠာတွင်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုသင်စိတ်ဆင်းရဲမှုနှစ်ပေါင်းများစွာကယ်တင်လိမ့်မည်ဟူသောအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့သင်ယူ.
ဒါပေမဲ့သင်ချစ်မြတ်နိုးဖို့မဟုတ်ပေမဲ့လူမျိုးတဘက်၌အငြိုး, သို့မဟုတ်တူ, သို့မဟုတ်ဆက်စပ်? ဒါကြောင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောသူတို့သည်မဟုတ်. ကကောလိပ်ပါမောက္ခမှာအမျက်တော် ထွက်. ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမှုကြီးကိုငါတဖန်ကိုယ်တော်ကိုမြင်ရှိသည်ဘယ်တော့မှခြင်းဖြစ်သည်. တကယ်တော့, အဲဒီအမှုကိစ္စအဆို၌ငါ့ခံစားချက်တွေကို၏ဆုံးဖြတ်ချက်အောင်မြင်ရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရဘူး, ငါအပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းမခံစားရဘူး. အဘယ်ကြောင့်ငါ vet အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူလိမ့်မည်? သူကတောင်းပန်ဘယ်တော့မှမ. ကိုယ်တော်နှင့်အတူငရဲ! ငါ့ကြောင်သေဆုံး! မကောင်းတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု!
သို့သော်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးအားဖြင့်ပြစ်မှားခဲ့ပြီးပြီကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရတဲ့အခါသင်ဂရုစိုက်, ဒါကြောင့်မျိုးသီချင်းဆိုသံတူင် “အတန်း, အတန်း, သင်၏လှေ Row,” ကလူတိုင်းသွားစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုသိတယ်, နှင့်ဘယ်သူမှအဲဒါကိုရပ်တန့်ရန်ကျေးဇူးတော်လမ်းသိတယ်. တဖန်သင်တို့ကမဆုံးကြပါလျှင်, ငါသည်သင်တို့ငါ့ဘဏ်ဖြင့်ရှိသည်ကြောင်းကိုသင်၏ချစ်သူအားဖြင့်ထိုအတူဆက်ဆံရေးရှိခြင်းတက်ပေးမှာ, အကြှနျုပျကိုမယုံ, သင်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်မှမလိုချင်ကြဘူး.
ဟုတ်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏အမျက်ဒေါသကိုပယ်ရှားလမ်းကိုသင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်အရာပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူတည်. သင်ကံကောင်းနေပါရင်, သင်ကအကြောင်းတစ်ခုရိုးသားစကားပြောဆိုရပါလိမ့်မယ်. ဒီတိုက်ပွဲကိုသင်စေ၏သမျှထွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, သင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သောသက်သာခံစားရပါလိမ့်မယ်. အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည် “အနိုင်ရ” ငြင်း — သင်အနေဖြင့်အချိန်တိုင်းအားပြုလတံ့သော, ပြားချပ်ချပ်ထုတ်ဖြည်၏သဘောတွင်, unqualified တောင်းပန်ရန် — ပြီးတော့နောက်ကျောနှင့်သွားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားနေရတယ် “teasingly” နောက်တဖန်အကျော်ကကိုတက်စေ, သောသင်တို့ပြုမထားသင့်. သင်သည်အစဉ်အမြဲမှားပြုပြီးပြီအရာအားလုံးကိုသတိရလျှက်ပျော်မွေ့မထားရင်, ချုပ်ထားကြောင့်မေ့လျော့.
သင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီး Expendables သည့်အခါအမှုအရာသည်သဘာပိုခက်ခဲတယ်, ထိုသို့ကျော်င်သည့်အခါ, သင်သည်တစုံတခုကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့နေဆဲမခံစားရဘူး. သင်ကသံသယရှိသည့်ရှင်းပြချက်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြရတယ်, သို့မဟုတ်သင်နေဆဲသူမှားခဲ့ထင်နှင့်သူဆဲမှားခဲ့ကြသည်ထင်သည်, နှင့်ဟောပြောချက်ကိုမျှငွေပမာဏမည်သူမဆိုရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီ. ဘာလုပ်မလဲ?
တစ်ခါတစ်ရံအထူးချွန်ဆုံးအရာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီကိုမေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်: ငါတဖန်ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းရန်လျှင်ဖြစ်ပျက်မည်ကိုအဆိုးဆုံးအရာကဘာလဲ? အမျိုးသမီးများ — နီးကပ်ခဲ့ဖူးဘူးသောသူအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ, ပလေတိုကယောက်ျားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ — လှသော၏ထင်ပေါ်ကျော်စောလျှော့မတွက်ပါ “Oh, ဘုရားရေ, သင်မင်းက drop လို” အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းအထီးတိုင်ကြားချက်များ၏စာရင်းထဲတွင်. ငါအားနည်းချက်မှာယောက်ျားကျွန်တော်တို့ကိုရှိသည်သောတစုံတယောက်ကိုဧရိယာကိုရွေးထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်, ကပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းသွေ့ခြောက်ထုတ်အခွံသည်အထိဖြစ်ပျက်သမျှထဲကဘဝစဉ်းစားနဲ့ပြောနေတာမဖြစ်လို. တစ်ခါတုန်းကငါ့ရုံးခန်းတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူတစ်မျှမျှတတအပူအီးမေးလ်လဲလှယ်ပေါ်သို့, ဒါကြောင့်အားလုံးနံနက်အပေါ်သွားလေ၏, ပြီးတော့ခန့်မှာ 11:00, ဤသူသည်ငါ့ကိုဆိုသည်ကိုတစ်စေလွှတ်, “ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်နောက်တဖန်အမိတ်ဆွေများဖြစ်ရှိသည် 11:30, အောက်မေ့သတိရသောကြောင့်, ကျနော်တို့နေ့လည်စာစားထွက်ခွါဖို့ရှိသည်အခါဖြစ်ပါတယ်။” ထိုအခါငါတို့သည်ခဲ့ကြသည်. အရာ! ကျော်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း. တကယ့်ကိစ္စမဟုတ်သောကြောင့်, နှင့်တကယ့်အရေးမပါဘူးလာသောအခါ, သင့်ကျော်ကိုကြေညာနိုင်. ထိုအက. သင်သည်ကြွေးကြော်သံကိုပင်နိုင်ပါသည် “အရာ!” သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဒါပေမယ့်ကောင်လေးသင့်အကြောင်းပြောနေတာချင်တာလဲဆိုတာသိတယ်သေချာပါစေ, သို့မဟုတ်သင်ရယ်စရာရူပရလိမ့်မယ်.
အဘယ်မျှလိင်သင်တစ်ဦး Better Life Live ကိုကူညီပါနိုင်သလား